Qiimaynta Ciyaartoyda Ee Kulankii Waalida Ahaa Ee Everton vs Liverpool & Xiddigaha Bandhiga Weyn Soo Sameeyay - Gool24.Net
Qiimaynta Ciyaartoyda Ee Kulankii Waalida Ahaa Ee Everton vs Liverpool & Xiddigaha Bandhiga Weyn Soo Sameeyay
Kooxaha Liverpool iyoo Everton ayaa bar-bardhac ku kala baxay kulan xiiso badan isla markaana muran badan lahaa oo labada dhinac ku dhex maray Goodison Park, natiijaa 2-2 ah ayaa ka dhigan inay Everton hoggaanka 14 dhibcood ku hayso halka Liverpool ay 10 dhibcood booska 2-aad ku timid.
Sadio Mane ayaa goolka furitaanka u keenay Reds kahor inta uusan kansalin Michael Keane oo madax galay, Mohamed Salah ayaa markale qaybtii dambe hoggaanka usoo celiyay xiddigaha Jurgen Klopp balse Dominic Calvert-Lewin ayaa diiday inuu Ancelotti guuldarraysto.
Dhacdooyinka kale ee waaweyn ee kulankaas ayay kamid ahaayeen in Richarlison casaan ku qaatay Thiago daqiiqadihii ugu dambeeyay halka daqiiqadii dhimashada gool uu Henderson u dhaliyay Liverpool ay VAR ka beenisay.
Waxaanu halkan idinkula wadaagaynaa qiimaynta xiddigihii kulankaas oo uu sameeyay wargeyska Mirror, Everton ayay qiimayn ahaan ugu sarreeyeen Michael Keane, Lucas Digne, Allan, James Rodriguez iyo Calvert-Lewin.
Dhinaca Liverpool xiddigaha ugu qiimaynta wanaagsan ayaa ahaa Andrew Robertson, Thiago iyo Jordan Henderson.
Qiimaynta Labada Kooxood
catosh yare says:
wan ku farax sanahay bar bardacaa ay Galen labada mos
Amoore shiil says:
Qoralka saxa chelsea ma aha liverpol dhaha mise chelsea tagerta kkk
Yaawaaye marka xidiga garoonka tankale meesha aad Chelsea ku qortay Liverpool kadhig
Waar izka haga jiya oo ciyartoyda zoo dhamayztira sadio mane meeday qimayntiiza mide kale ma chalsea ayaa ciyaaryzay